#मृत्यु Archives - e-Sidha Nepal
#अदिती बुढाथोकी #अष्ट्रेलिया #केपी शर्मा ओली #कोरोना #कोरोना भाईरस #ज्योति मगर #दुर्घटना #नेपाल टेलिकम #पक्राउ #पोखरा #प्रधानमन्त्री #भारत #भिटेन #भुकम्प #मृत्यु #राशि #राशिफल #सरकार #स्वास्थ्य VTEN अमेरिका आइसोलेसन आजको पञ्चाङ्ग उपचार कोभिड–१९ कोरिया कोरोना भाइरस कोरोना संक्रमण कोरोना संक्रमित क्वारेन्टाइन गोकुल प्रसाद बाँस्कोटा गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा गोकुल बाँस्कोटा डिस्चार्ज निधन पशुपति पशुपतिनाथ पोजिटिभ बलात्कार बाबुराम भट्टराई महाशिवरात्रि महेश बस्नेत रवि लामिछाने रासस लकडाउन
अस्पतालले भर्ना लिन नमानेपछि को’रोना संक्रमणका कारण न्यूयोर्कमा एक नेपालीको कोठामै मृ’त्यु
#मृत्यु अमेरिका ४ बैशाख २०७७, बिहीबार १२:३२
न्यूयोर्क, अमेरिकाको न्यूयोर्कमा बस्दै आएका ४४ बर्षिय पवनकुमार मल्लको को’रोना संक्रमणका कारण मृ’त्यु भएको छ । बिगत ३ हप्तादेखी बि’रामी रहेका मल्लको न्यूयोर्क उडसाइडस्थित आफ्नै निवासमा बुधवार बिहान मृत्यु भएको हो ।को’रोना भाइरसका कारण बिरामी परेका प्रकाश भनेर चिनिने पवनकुमार उपचारका लागि केहीदिन पहिले अस्पताल पुगेका थिए, तर अस्पतालले ठाँउ नभएको भन्दै भर्ना लिन नमानेको बताइन्छ । मल्लका एक श्रीमती र दुई छोरी नेपालमा छन् । सन् २०१२ मा अमेरिका आएका मल्लले केही समय पहिले न्यूयोर्कमा ग्रिन क्याब नामक ट्याक्सी चलाउँथे । उनि नेपाल प्रहरीको असई थिए ।पवनकुमारको आफ्नो मान्छे..फुर्सदमा
#मृत्यु, अमेरिका बिश्व No Comments »
#मृत्यु श्री कृष्ण ३ बैशाख २०७७, बुधबार ०४:३४
यो एउटा जिज्ञासा र आश्चर्यको विषय नै हो कि भगवान कृष्णले मानव रुप छोडेपछि के भयो? पाण्डवहरु के भए ? वास्तविक कहानी के हो ? महाभारतको १८ किताब मध्ये १६औँमा मौसल पर्वको बारेमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। यो पर्वको ९ वटा खण्ड छ। कुरुक्षेत्रमा भएको महाभारत युद्दको ३५ वर्ष पश्चात भारत साम्राज्य शान्तिपुर्ण एंव सम्पन्न भएको थियो। तर कृष्णको जवानी बिस्तारै सकिदै थियो। कथा अनुसार कृष्णको छोरा साम्बा र उसका साथीहरु महिलाको वस्त्र धारण गरेर ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ट, नारद तथा विभिन्न ऋषिहरुलाइ भेट्दै हिडेका थिए। यी ऋषिहरु द्वारिका आउदै गरेका..फुर्सदमा
#मृत्यु, श्री कृष्ण राशिफल No Comments »
को’रोनाबाट लन्डनमा पहिलो नेपाली महिलाको मृ’त्यु
#कोरोना #मृत्यु लन्डन १ बैशाख २०७७, सोमबार ०९:१९
बेलायतमा को’रोना सं’क्रमणले भयावह रुप लिएसँगै नेपालीको मृ’त्युको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ। आइतबारसम्म कोरोनाबाट मृ’त्यु हुने नेपालीको संख्या आठ पुगेको छ भने गत हप्ता मृत्यु भएका दश जना पूर्व गोरखाको कारण खुल्न बाँकी छ। लन्डनको सडवरी टाउन बस्ने ३९ वर्षीया पुष्पा घलेको कोरोनाकै कारण शनिबार मृ’त्यु भएको छ। उनी बेलायतमा को’रोनाबाट ज्या’न गुमाउने आठौं नेपाली हुन् र, अहिलेसम्म पुष्टि भएकामध्ये पहिलो महिला हुन्। पुर्ख्यौली घर कास्की पोखरा भएकी घलेको स्वास्थ्य स्थिति खराब भएसँगै शनिबार अचानक श्वासप्रश्वासमा पनि गाह्रो भएपछि नर्थवीक पार्क अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। अस्पताल पुर्याएको करिब ४ घण्टामा..फुर्सदमा
#कोरोना, #मृत्यु, लन्डन कोरोना भाइरस No Comments »
पैदलै घर जाने क्रममा ३०० किलोमिटर हिँडिसकेकी गंगाको भोकका कारण मृत्यु !
#मृत्यु ३० चैत्र २०७६, आईतवार १२:११
भारतको कर्नाटकको बेल्लारीमा एक महिला म’जदूरको भोकका कारण मृ’त्यु भएको छ । लकडाउन लगाइएपछि ती महिला बेंगलुरुबाट ४१२ किलोमिटर पर रहेको रायचुरका लागि पैदलै हिँडिन् । खाली खुट्टा भो’कप्यास सहँदै हिँडेकी उनको बाटैमा मृ’त्यु भयो । उनी ३०० किलोमिटर हिँडिसकेकी थिइन् । महिलाको नाम गंगाम्मा हो र उनी २९ वर्षकी थिइन् । लकडाउनपछि मजदूरी गर्न नपाएर उनी लगायतका म’जदूरहरू बेंगलुरु छोड्न बा’ध्य भए। कसैले पनि उनीहरुलाई गाडीमा राखेर लान मानेन । उनीहरु एउटा ट्य्राक्टर चढेका थिए तर त्यसलाई पनि तुमकुरुमा रोकियो । भारतको सर्वोच्च अदालत र केन्द्र सरकारले बारम्बार राज्य..फुर्सदमा
#मृत्यु बिश्व No Comments »
कपिलवस्तुको आइसोलेशनमा भर्ना भएका बिरामीको मृत्यु
#मृत्यु २५ चैत्र २०७६, मंगलवार ०४:०२
काठमाडाैँ । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को आशंकामा कपिलवस्तु अस्पतालको आइसोलेशनमा भर्ना गरिएका एक बिरामीको ज्यान गएको छ। कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिका–२ जलैया घर भएका ३० वर्षीय गोवर्धन भरको सोमबार साँझ ८ बजेतिर ज्यान गएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। ज्वरो र खोकी आउने तथा छाती दुख्ने भएपछि चन्द्रौटास्थित स्थानीय मेडिकल हुँदै शुक्रबारदेखी कपिलवस्तु अस्पतालको आइसोलेशनमा उपचार भइरहेको थियो । फोक्सो र मुटुले काम गर्न छाडेपछि भरको मृत्यु भएको बताइएको छ । कोरोनाको आशंका गरिएका भरको स्वाब परीक्षणका लागि बुटवलमा पठाईएको छ । उनको कोरोना टेस्ट रिपोर्ट भने आउँन बाँकी छ।
#मृत्यु समाचार No Comments »
#मृत्यु अमेरिका कोभिड–१९ कोरोना भाइरस २२ चैत्र २०७६, शनिबार ०७:२७
अमेरिकामा कोरोना भाइरस कोभिड–१९ बाट मृत्यु हुनेको संख्या सात हजार नाघेको छ। जोन्स हप्किन्स युनिभर्सिटीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्ममा अमेरिकामा मृत्यु हुनेको संख्या सात हजार एक सय ५२ पुगेको हो। अहिलेसम्म अमेरिकामा समग्र संक्रमितको संख्या दुई लाख ७७ हजार पुगेको छ। जसमध्ये करिब १० हजार मानिस निको भएर घर फर्केका छन्। चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोभिड–१९ को महामारी अहिले विश्वभर फैलिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा भाइरस नियन्त्रणको जिम्मा सम्बन्धित राज्यका गभर्नरलाई सुम्पिएको बताएका छन्। यसअघि उनले भाइरस नियन्त्रणका लागि उचित कदम नचालेको भन्दै उनको आलोचना हुँदै आएको..फुर्सदमा
#मृत्यु, अमेरिका, कोभिड–१९, कोरोना भाइरस कोरोना भाइरस, बिश्व No Comments »
#मृत्यु ११ फाल्गुन २०७६, आईतवार ०७:३१
दोलखा / दोलखा जिल्लाको कालिञ्चोक गाउँपालिका यात्रुबहाक बसको ठक्करबाट एक बालकको मृत्यु भएको छ । शिवरात्री मनाउनका लागि डोरी टाँगेर सहयोग माग्दै आइरहेका स्थानीय बालक पुजन थामीको मृत्यु भएको हो । अरनिको यातायातको बा ४ ख ५८०९ नम्बरको बसले थामीलाई ठक्कर दिएको थियो । थामीलाई बसको पछाडितर्फको चक्काले किच्दा घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । ठक्कर दिने बस र चालकलाई प्रहरीले नियन्न्त्रणमा लिएको छ । बालक कालिञ्चोक गाउँपालिका वडा नम्बर ९ का स्थायी बासिन्दा हुन् ।
#मृत्यु बस दुर्घटना १० फाल्गुन २०७६, शनिबार १४:३०
इटहरी । भारतमा भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुने इटहरीवासीको संख्या १० पुगेको छ । गत माघ २३ गते तीर्थयात्रामा गएका उनीहरू सवार बस भारतको सलेम बेंगलरु नेशनल हाइवेमा बिहीबार बिहान दुर्घटनामा परेको थियो । दुर्घटनामा इटहरी वडा नं. १०, ११ र १२ का १० जनाको ज्यान गएको हो । पूर्व क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय प्रदेश १ अनुसार मृत्यु हुनेमा ५६ वर्षका गोपाल तामाङ, ४६ वर्षका वीरबहादुर राई, ५० वर्षका टीकाराम चौधरी, ७० बर्षीय रसिलाल चौधरी, ६६ बर्षीया बुधनी थरुनी, ६५ बर्षीया फूलसरीदेवी चौधरी, ६५ बर्षीया मञ्जु राई, पवनलाल चौधरी, भजनलाल..फुर्सदमा
#मृत्यु, बस दुर्घटना Headline, समाचार No Comments »